Iwo akanakisa egomo mapikicha eMac | Ndinobva ku mac
Iwo akanakisa egomo mapikicha eMac
Mufananidzo uyu uchanzwika sewakajaira kwauri. Iyi ndiyo Wallpaper yakasarudzwa naApple kune vhezheni yeMacOS Mojave. Iyo inomiririra yakanaka yezvakatimirira mune ino chinyorwa kwaunogona kuwana yakawanda good mountains wallpapers. Kunyange ichokwadi kuti chifananidzo ichi ndecherenje reMojave uye kuti idunes, haungandiudze kuti haigone kumiririra zvakakwana, nekuti inondiyeuchidza gomo. Ndinovimba unonakidzwa nezvirimo zvakanyanya uye rangarira kuti kana iwe uchitsvaga yakanaka Wallpaper, iwe unogara uine akati wandei ezvinyorwa zvakapfuura kwaunogona kuwana 50 yakanakisa kumashure kana kutizira mukati mamwe emahombekombe aya.
Tinogona kutanga neimwe yemari iyo Apple vanga vachishandisa masisitimu avo ekushandisa. Vamwe vavo vane makomo sevanopikisa. Tevere tinokusiira iyo yaishandiswa macOS El Capitan. Sezvauri kuona kumashure uko, kunyangwe iyo protagonist isiri makomo chete, tinogona kuvatenda uye isu tinogona kuona hukuru hwavo. Nedenga rine nyeredzi, rinokukoka iwe kuti upedze husiku huripo uchifunga nezvekukura kwechisikigo uye rinotiyeuchidza kuti tiri vadiki sei.
Imwe vhezheni yakashandiswa neApple kumadziro emadziro macOS El Capitan Ndiyo yatinokusiirai inotevera. Tinoenda kubva usiku kuenda masikati asi nerunako rwakafanana. Panguva ino tine mufananidzo wegomo rinoita sezvisingabviri kukwira nekuda kwekumira kwaro uye izvo zvinopa Mac yedu kubata kusingafi.Negomo iroro rinoita serinotonga zvinhu zvese uye rinoita kunge rinesu kubva pakutanga kwemazuva. Izvo nenzira, kana iwe usingazive, ndinofunga kudaro, El Capitan igomo riri muYosemite natural park, rimwe zita rakasarudzwa kune imwe yeApple inoshanda masisitimu auchawana pazasi.
Ipapo tinokusiira iyo yekumashure yakashandiswa neApple kune yayo vhezheni macOS Sierra. Makomo ane sinou nezuva richivarova zvinyoronyoro. Ndinoedza kuziva kuti kubuda kwezuva here kana kuti kunyura. Ini ndinobheja pane yekupedzisira, asi zvakaoma kutaura nekupfura kwakadaro. Iyi yakatarisana nemakomo uye ndinotenda nemoyo wese kuti ibudiriro yakazara.
Zvakafanana nemunin'ina wake, sekutaura, pasi pe macOS High Sierra rinotarisawo pamusoro pamakomo. Asi panguva ino tine mufananidzo wakavhurika, uyo unosanganisira zvimwe zvinhu zvakawanda pamepu.Tine dziva, miti yakawanda uye hongu makomo. Vanoita sechando chekutanga chinotanga kudonha mumatsutso munharaunda iyoyo. Inoshamisa mavara mumufananidzo uyu akajairika emwaka wephotogenic wezvose. Wallpaper inokodzera kunakidzwa pese painoiswa paMac.
Iye zvino tine nesu shanduro ye macOS Yosemite. Mukuremekedza paki yechisikigo iri kumabvazuva kweSan Francisco, muCalifornia, United States. Yakatumidzwa seWorld Heritage Site neUNESCO muna 1984 uye yaivewo paki yekutanga yakarongwa nehurumende yemubatanidzwa yeUnited States. Nenzira, kana iwe uchida kutora mifananidzo iwe unozoziva kuti mumwe wemadzibaba emazuva ano kutora mafoto, Ansel Adams, akatora paki paki kakawanda. Ivo vakakodzera kuona mifananidzo yako. Muchokwadi ini ndichasiya vaviri vacho mune ino post nekuti kunyangwe vari mutema nemuchena, iwe uchaona simba ravainaro uye chokwadi chokwadi chavo. Hapana shanduko yemakomputa, inongovandudza mukamuri ine rima ine hunyanzvi hwakakwana.
Yosemite naAnsel Adams. Chengeta pfungwa dzako dzakavhurika uye usafunge kuti kuve mutema nemuchena hazvina kunaka. Iwe uchada vhezheni yake yeEl Capitan. Kana iwe ukaongorora mufananidzo zvakanaka, uchaona kuti kushandisa kamera ine tekinoroji yakaderera pane yezvino, yakakwanisa kutora mwenje yese nemimvuri yemupata. Uyezve, hapana kana pixel imwe chete yemufananidzo isina ruzivo. Zvose zvine tsanangudzo yacho, kunyange mumvuri wakadzika. Zvinoshamisa kuona mufananidzo.
Tichifunga nezvemifananidzo iyo Apple yakashandisa makomo mumasisitimu ayo anoshanda, isu tichaenda kune imwe sarudzo yemifananidzo iyo tinogona kushandisa kuMacs edu.
Isu tinotanga newallpaper iyo, kunyangwe isiri yechokwadi, haina kushoma uye inotaridzika seyakanaka se Wallpaper yekombuta yedu. Azere nemakomo ari ma protagonists eiyi blog post, isu tine zvese izvo yakanaka desktop kumashure inofanira kuunganidza. Runako, simba uye pamusoro penzvimbo dzese kuitira kuti zvidhori zvedu zvezvirongwa kana mafaera atinoshandisa mazuva ese aonekwe pasina matambudziko. Nzvimbo iyo Ndinoshuva kuti dai ndaigona kuona mangwanani oga oga paunovhura maziso ako.
Iine inotevera kumashure kana mufananidzo weMac yako, iwe uchada kuivhara uye kuenda parwendo. Is nzvimbo inoshamisa uye kuti ndine chokwadi chekuti uchashandisa kuona kuti inotaridzika sei sekumashure. Ini ndatokuudza kuti zvinoshamisa uye kuti ndeimwe yeavo vakasarudzwa neni, kunyanya kune iyo mwaka umo mazororo ari kusvika. Zvinondikurudzira kuti ndikwanise kuva nechinangwa chekubuda mumonotony uye kuda kutsvaga chimwe chinhu. Nzvimbo iyi inonditakura uye inonditungamirira kumufaro wakakwana.
Ndanga ndichinetseka kuti ndiise mufananidzo unotevera here. Asi ndinofanira kuzviita. Kana isu tiine vhezheni yegomo reEl Capitan semashure eMacOS uye isu tine vhezheni yeAnsel Adams hombe, wadii kuva nazvo. shanduro yegomo pakati pechando? Inofanira kuiswa, isu takatarisana nemufananidzo unotiratidza mupata nekunaka kwayo kwose uye hutsinye hwemwaka wechando.
Iwo maviri anotevera mapikicha anobva, pamwe iwo makomo matatu ane mukurumbira pasi rose. Vanenge vatatu vevakakurumbira. Vokutanga vavo Gomo reFuji. Nzvimbo yepamusoro-soro pachitsuwa cheHonshu uye muJapan yose, ine 3776 mamita ekukwirira. Iri pakati peShizuoka neYamanashi prefectures pakati peJapan uye kumadokero kweTokyo. Rechipiri rinoenderana negomo refu-refu panyika. Everest, ine hurefu hwe8848 metres, iri paAsia kondinendi, muHimalayas, kunyanya muMahalangur Himal sub-gomo renji. Pakupedzisira iro kwandiri nderimwe remakomo akanaka kwazvo aripo. The matterhorn. Inowanikwa muAlps, inofamba neSwitzerland neItaly. Iyo hombe, inenge yakaenzanirana pyramidal peak ine sumo iri 4.478 metres.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iwo akanakisa egomo mapikicha eMac
HomePod mini iri kuuya kune dzimwe nyika munguva pfupi
Dropbox inotanga kuyedza yeApple Silicon-inoenderana application